Zoe Colletti – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Scary Stories to Tell in the Dark (2019) Unicode မကြာသေးခင်ကမှ ရုံတင်သွားတဲ့ Horror ကား ကောင်းကောင်းလေးပါဗျ။ ဇာတ်လမ်းတွေက နာကျင်စေတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွေက အနာကျက်စေတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွေက ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သူဘယ်ဝါရယ် လို့ ပုံဖော်ပေးတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရော ကိုယ်ရဲ့ ရှေ့ဖြစ်ဇာတ်လမ်းကို ကြိုသိရပါမယ် ဆိုပါစို့။ အကောင်းတွေတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ အဆိုးတွေ….. ကံကြမ္မာဆိုးတွေ ဇာတ်လမ်းကတော့ ဒီလိုပါ။ ဟောလိုဝင်းနေ့မှာ ကလေးတစ်သိုက်က သရဲခြောက်တဲ့အိမ်ကြီးတစ်အိမ်ကို ရောက်သွားတယ်။ အဲဒီအိမ်မှာ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခု ရှိတယ်။ အဲဒီအိမ်က အမျိုးသမီးရဲ့ဇာတ်လမ်းကို နားထောင်ပြီးတဲ့ကလေးတိုင်း ပျောက်ဆုံးသွားလေ့ ရှိတယ်။ မမျှော်လင့်ဘဲ အဲဒီအမျိုးသမီးကြီးရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကို ရခဲ့တယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ ဇာတ်လမ်းတွေ အလိုလိုပေါ်လာခဲ့တယ်။ ပေါ်လာခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကလည်း တကယ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီကံကြမ္မာဆိုးကို သူတို့ ဘယ်လို ရှောင်လွှဲကြမလဲ????? ရှောင်လွှဲဖို့ရော ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား????? စာအုပ်ကရော ဘာရာဇဝင်တွေ ရှိနေတာလဲ????? ဇာတ်လမ်းက ကြောက်ဖို့ကောင်းသလို ...
Wildlife (2018) Rating 7.3 ရရွိထားတဲ့Drama ကားေကာင္းေလးတစ္ကားနဲ႕မိတ္ဆက္ေပးပါ့မယ္…Wild Life ဆိုတဲ့ရုပ္ရွင္ကားေလးကေတာ့ လက္ရွိလူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ျဖစ္ေလ့ရွိတာေလးေတြကို မီးေမာင္းထိုးျပၿပီး ရိုက္ကူးထားတဲ့ ကားတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္။မိသားစုနဲ႕အတူၾကည့္လို႕ေကာင္းမယ့္ ကားမ်ိဳးဆိုရင္လည္းမွားမယ္မထင္ပါဘူး… အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုမွာ စီးပြားေရးအဆင္မေျပရင္ ဘယ္လိုပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တယ္ဆိုတာရယ္ စိတ္ေတြကဘယ္လိုေျပာင္းလဲႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ခေလးတစ္ေယာက္ရွိတဲ့ လူသံုးေယာက္မိသားစုေလးနဲ႔ ရိုက္ကူးျပသထားတဲ့ ပညာေပးကားေလးျဖစ္ပါတယ္။ ၾကည့္ရႈအားေပးၾကပါဦးေနာ္… Credit Review